Nyocha EA Ego Ego na - Ego kacha mma EA | Ndị Ọkachamara Ndụmọdụ | FX Robots
HomeỌnwa ahia EANyocha Ego EA nke Ahịa
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Ọnwa ahia EA 1
Ahịa: $ 269 (AKPỌ LIFETIME 1, AKW FREEKWỌ FREEB FREER FREE AKW &KWỌ & 24 / 7 UGO Onyinye)
Ego ụzọ abụọ: AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD na USDSGD
Etiti oge: ọ bụla
Mara: Enwere ngwugwu 3 dị iche iche nke FXTraderKit ENdụmọdụ xpert dị ugbu a:
- Onye ahia nke Sun EA: Akwụkwọ ikike nke 1, Akwụkwọ ntuziaka Onye ọrụ, Mmelite n'efu & 24 / 7 Nkwado Enyi, Ọnụ Ahịa: $ 269
- Ọnwa ahia EA: Akwụkwọ ikike nke 1, Akwụkwọ ntuziaka Onye ọrụ, Mmelite n'efu & 24 / 7 Nkwado Enyi, Ọnụ Ahịa: $ 269
- Pụrụ Iche Pụrụ Iche: Akwụkwọ ikike 1 nke Trader's Sun & Trader's Moon EA's, Mmelite n'efu & Nkwado, Ego wepuru: $ 405
Nweta ihe omuma banyere ihe nkwado Forex Robot a ma guo nke anyi Nyochaa nke Sun EA nke onye ahia
Nyochaa EA nke Ego Ego - Onye Ndụmọdụ Dị Ike Forex maka Metatrader 4
Ọnwa ahia EA bụ ihe dị ike nke ukwuu FX Expert Advisor maka ma mmalite ma uru. Ndị mmepe nke a Forex robot anọwo na-arụsi ọrụ ike ruo ọtụtụ afọ, iji nwee ike ịmepụta nke a algorithm.
Onye ndụmọdụ a ọkachamara bụ ugbu a bụ otu kachasị mma azịza azụmahịa na-akpaghị aka na ahịa ma kee ya iji napụta nnukwu ahịa. Agbanyeghị, na nlọghachi dị elu na-eweta ihe egwu dị elu ma anyị na-akwado iwepu uru na oge ma ọ bụ ịkwaga uru na akaụntụ azụmahịa ọzọ.
Ọnwa ahia EA ejikọta netwọk na ntanetị, na-agba ọsọ na ntanetị ahịa Metatrader 4 (MT4) na-etinye, nchịkwa na ahịa mmechi. Ndị mmepe na-etinye ọtụtụ ndị na-ere ahịa ahia na ihe nzacha iji wuo ya Ọnwa ahia EA ma nwalekwa software ahụ tupu ịmalite na ahịa, maka oke ọrụ.
FX Robot nwere nnukwu mmeri na AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD na USDSGD ụzọ abụọ ụzọ abụọ.
Nke a pụrụ iche Ọnwa ahia EA e mepụtara site otu ọkachamara otu ndị ahịa na-achọ ịhụ gị ịga nke ọma!
-Adịghị maara na Forex Trading?
Jiri nke Ọnwa ahia EA na-atụgharị gị ego n'ime ọlaedo!
Ị anụbeghị banyere FX Trading Robots Tupu?
Mfe ego na-enweghị mgbalị ọ bụla bụ ihe Ọnwa ahia EA bụ ihe niile. Ọ bụ atụmatụ Forex akpaghị aka na-enye gị ohere izu ike na naanị ilele FX Trading Robot na-eme aghụghọ ya. Mgbe emesiri inye gị, Robot weghachitere gị azụmahịa gị niile. Nke a na-enyere gị aka ijide onwe gị ebe ị na-etinye ike gị n'ihe ndị ọzọ dị mkpa.
EA na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ 24 / 5 na-achọ ohere ahia ahia. Ya mere ọ gwụla ma ị gbanyụrụ ya, ị gaghị echefu otu ahịa ahia.
N'adịghị ka anyị bụ ụmụ mmadụ, ndị Ọnwa ahia EA enweghi nsogbu nke mmetụta uche ma ọ ga - arụ ọrụ naanị na gburugburu ebe ana - agbako. Onye ndụmọdụ ọkachamara agaghị eme mkpebi oge adịghị anya.
Ọnwa ahia EA - Banyere Tragic Logic, Mbido na ihe ndị ọzọ chọrọ
Ọnwa ahia EA na-a n'ụzọ zuru ezu na akpaghị aka Forex Expert Advisor nke ahụ na-eji ya Martingale ,kpụrụ, mana enwere ọtụtụ ndozi na uru. Edere ahia ahia nke EA na MetaQuotes Asụsụ 4 site n'aka ndi otu ndi nwere ihe mmemme.
FX Robot a kachasị site na iji sọftụwia “Tick Data Suite maka Metatrader 4” yana mgbasa na-esegharị na simulation nke mkpọda. E nyere ndị ahịa onye Switzerland na-ere ahịa Dukascopy maka nyocha maka ezigbo 99%.
EA na-emepe ọnọdụ dabere na ịchọ ihe mgbaàmà site na iji usoro ngosipụta (Bollinger Band, Commodity Channel Index, wdg), yana usoro kandụl.
Ọnwa ahia Forex Robot na-eji nzacha nke ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa mepere emepe, mbipụta kacha, njikwa ụzọ abụọ na ndabere akụkọ. Nke ahụ na-enye ohere igbochi ọnụ ụzọ ịbanye n'ahịa ahụ n'oge kwesịrị ekwesị ma belata mkpokọta mkpokọ na akaụntụ ahụ.
Azụmaahịa EA kwa ụbọchị, mana isi akara maka iwu imeghe abịa naanị n’abali n’oge nnọkọ Esia. Nke a na-ekwe nkwa ntinye naanị na ọnụahịa kachasị mma.
Ọnwa ahia EA na-arụ ọrụ AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD na USDSGD akwụkwọ ego ụzọ abụọ.
Anyị na-atụ aro ịzụ ahịa na Ọnọdụ nchekwa n'iji ihe egwu 50% (ma obu nke pere mpe). Nke a choro $ 5000 maka otutu 0.01.
Bụrụ na nke ịzụ ahịa na Nkezi mode ihe a tụrụ aro bụ 35% (ma ọ bụ obere). Ọ chọrọ $ 3000 maka otutu 0.01.
Zụ ahịa na Ime ihe ike ịkwesịrị itinye ihe egwu 25% (ma ọ bụ obere). Ọ chọrọ naanị $ 1500 maka nza 0.01.
Ihe ọzọ ị ga - eme dị ka nke atọrọ.
Ọnwa ahia EA - Ngwá Ọrụ Azụmaahịa Azụmaahịa Forex Ka Ọ Dị Mkpa Ka I Mee nke Ọma
Onye Ọkachamara Ndị Ọhụụ na-ahụ maka Ọrịa dakọtara na ndị na-ere ahịa Metetrader 4 (MT4), yana ndị na-ere ahịa na-eji mmezu ụdị ECN.
Anyị na-akwadosi ike ka ị rụọ ọrụ akaụntụ ngosi tupu iji ezigbo ego azụ ahịa. Nke a ga - enyere gị aka ịmara ụzọ Onye Ahịa Ahịa si arụ ọrụ tupu ịme ezigbo ego na ezigbo ego.
Ụgha Nkwụghachi: Onye na-ere ihe na-enye nkwa ego zuru oke n'oge 30 ụbọchị. Ọ bụrụ Ọnwa na-ere ahịa Forex robot emeghị uru ruo na njedebe nke ụbọchị 30, onye na-ere ahia ga-akwadoghachi ego gị. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na mmịpụta na nguzozi nke akaụntụ gị karịrị 35%, a ga-amalite nkwụghachi, n'ọnọdụ ị jiri ntọala akwadoro.
Ọnwa ahia EA bụ n'otu ntabi dị na unbelievable price, ie naanị $ 269. Ya mere echela ka jidere gị oyiri!
Gaa na weebụsaịtị Trader's Ọnwa EA
Business Star EA Nyocha
idọba nakawa etu esi
Ngwaọrụ ahia ahia
Onye na-ahụ maka ọkachamara na FXTraderKit
Ọnwa na-ere ahịa
Ọnwa ahia Forex Robot
Kacha ọhụrụ Ndị Kacha Elu
TRADER'S MOON EA - Ọ B NEW ỌR NEW ỌGB FOR ỌGB FOR ỌGBE ỌGB FOR Ọ BAT Ọ B FOR METATRADER 4 (MT4) NKW PERKWỌ AKW :KWỌ AKW :KWỌ: + 4.3% EBU NRỌ (EGO EGO! Nyocha Ego EA nke Ahịa - Onye Ndụmọdụ Dị Ike Forex maka Metatrader 4 Released Nweta ozi ndị ọzọ na ntinye ego ebe a: https://www.bestforexeas.com/traders-moon-ea-review/ Ahịa EA nke Ego bụ ihe dị ike ma na-arụ ọrụ akpaghị aka FX ọkachamara. Onye ndụmọdụ maka ndị mbido na ọganiihu. Ndị mmepe nke Forex Robot a anọwo na-agbasi mbọ ike ruo ọtụtụ afọ, iji nwee ike ịmepụta usoro azụmahịa a. Onye ndụmọdụ a ọkachamara bụ ugbu a bụ otu kachasị mma azịza azụmahịa na-akpaghị aka na ahịa ma kee ya iji bulie elu... GỤKWUO "